Amasosha/amaphoyisa - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Ukwakhiwa kabusha kwesigcawu sangempela se-3D ngemva kokuzamazama komhlaba
(1) Ukubuyiselwa ngokushesha kwendawo yenhlekelele ngaphandle kokubonwa kwe-dead angle
(2) Yehlisa amandla okusebenza kanye nobungozi bokusebenza kwabaphenyi
(3) Ukuthuthukisa ukusebenza kahle kophenyo lwezinhlekelele zezwe
Isithombe-skrini esiyimodeli ye-3D sokuzamazama komhlaba kwe-Hualien
Ngo-23:50 ngo-February 6, 2018, ukuzamazama komhlaba okungu-6.5 kwenzeka endaweni yolwandle eduze kwaseHualien County, eTaiwan (24°13′ N—121°71′ E). Ukujula okugxilwe kuzo kwakungamakhilomitha ayi-11, futhi yonke iTaiwan yashaqeka.
Ukuzamazama komhlaba kwenzeka ngo-August 3, 2014 eLudian, esifundazweni saseYunnan. Umsebenzi wokuthwebula izithombe we-3D osheshayo we-UAV oblique photography ungabuyisela indawo yenhlekelele ngezithombe ze-3D, futhi ukwazi ukubona indawo yenhlekelele ehlosiwe ngaphandle kwe-engeli efile emizuzwini embalwa.
Imodeli ye-3D ibuyisela isigcawu sangempela
Ukugeleza kwamatshe odaka nokudilika komhlaba
(1) Ukubona ngokuqondile izindlu nemigwaqo ngemva kwenhlekelele
(2) Ukuhlolwa kokudilika komhlaba ngemva kwenhlekelele
NgoZibandlela wezi-2015, i-National Geographic Information Bureau of Surveying and Mapping yakha i-3D yendawo yesehlakalo sangempela okokuqala ngqa ukuze yazi isimo senhlekelele sezindlu nemigwaqo ngendlela enembile, eyadlala indima ebalulekile ngemva kokuhlenga.
Imodeli ye-3D yokugeleza kwe-Mud-rock e-Shenzhen
Ngo-August 12, 2015, kwenzeka ingozi yokubihlika kwenhlabathi engazelele eShanyang County, eSifundazweni SaseShaanxi, eyabulala inqwaba yabantu. Ukudilika komhlaba kwenza imigwaqo ingahambeki. I-UAV oblique photography inezinzuzo zayo eziyingqayizivele kule ndawo. Ngenxa yemodeli ye-3D, ukuhlenga nokumbiwa kokudilika komhlaba kungenziwa kahle.
Imodeli ye-3D ye-Landslip e-Shaanx
Imodeli yesiqephu sangempela se-3D yokuqhuma e-Tianjin
Ngo-Agasti 12, 2015, ukuqhuma kwe-Tianjin Binhai New Area kwashaqisa izwe lonke. Endaweni enkulu yokuqhuma kwamakhemikhali ayingozi, ama-drones abe "umhloli" ophumelela kakhulu. I-drone ayiyona "i-pathfinder" elula, futhi yaqeda umsebenzi we-oblique wesithombe sengozi, futhi yakhiqiza ngokushesha imodeli engokoqobo ye-3D , eyadlala indima ebalulekile ekulandeleni umyalo wokubuyisela inhlekelele kanye nokuhlenga.
Imodeli yesigcawu sangempela se-3D
Ukuzivikela kuzwelonke, ezempi
(1) Ukwakhiwa komhubhe webhuloho
(2) Ukuhlelwa kwedolobha
(3) Inhlolovo yendawo yemicimbi emikhulu
(4) Uphenyo lokuthunyelwa kwamandla ezitha
(5) Ukulingiswa kwezempi okubonakalayo
(6) Ucwaningo Nokusetshenziswa kwesimo senkundla yempi ye-3D
(7) Ukuhamba emkhathini, njll.